पहिलो एकदिबसियमा अस्ट्रेलियाको शानदार जित ! रिकार्ड्सन उत्कृष्ट ! - Hamro Nepal Cricket
पहिलो एकदिबसियमा अस्ट्रेलियाको शानदार जित ! रिकार्ड्सन उत्कृष्ट !
एकदिबसिय सिरिजमा अस्ट्रेलिया उत्कृष्ट सुरुवात !
टेस्ट सिरिजमा २-१ को हार बेहोरेको अस्ट्रेलियाले पहिलो एकदिबसिय खेलमा भने रोमान्चक जित हासिल गरेको छ । टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको अस्ट्रेलियाका लागि पिटर ह्यान्ड्स्कम्बले सर्बोच्च ७३ रनको पारी खेले ।
कमजोर सुरुवात पाएको अस्ट्रेलियाका लागि उसमान खवाजा र सौन मार्सले ९२ रनको साझेदारी गरेका थिए । ९२ रनको साझेदारी पछि अस्ट्रेलियाले केही लय पकडेको थियो ।
खवजा र मार्स दुबैले अर्धशतक प्रहार गरेक थिए । खवजाले ८१ बलको सामना गर्दै छ चौकाको मद्दतले ५९ रन बनाएका थिए भने ७० बलको सामना गर्दै चार चौकाको मद्दतले मार्सले ५४ रन जोड्न सफल भएका थिए ।
अन्तिमका ओभरहरुमा पिटर ह्यान्ड्स्कम्ब र स्टोइनिसले आक्रमक रुप अपनाएपछी अस्ट्रेलियाले उत्कृष्ट स्कोर बनाउन सफल भएको हो । पिटरले ६१ बलको सामना गर्दै छ चौका र दुई छक्काको मद्दतले ७३ रन जोडे भने मार्कस स्टोइनिसले ४३ बलको सामना गर्दै दुई चौका र दुई छक्काको मद्दतले ४७ र रनको पारी खेले।
भारतका लागि भुबनेश्वर कुमारले दुई र कुल्दिप यादबले दुई विकेट चट्काए भने जाडेजाले एक विकेट लिएका थिए । ५० ओभर ब्याटिङ गर्दै अस्ट्रेलियाले पाच विकेटको क्षतिमा २८८ रन बनाउन सफल भयो ।
२८९ रनको लक्ष्य पछ्याएको भारतलाइ पहिलो झट्का बेहेन्ड्रोफले दिएका थिए । पहिलो बलमै सिखर धवनलाइ पबिलियनको बाटो देखाउदै बेहेन्ड्रफले पहिलो विकेट लिएका थिए ।
धवन लगतै रिकार्ड्सनको बलमा बिराट कोहली र अम्बाती रायुडु आउट भएपछी भारत ठूलो समस्यामा परेको थियो । भारतले मात्र चार रनमा तीन विकेट गुमाइसकेको थियो । त्यसपछी कृजमा आएका महेन्द्र सिङ धोनी र ओपनर रोहित शर्माले १३७ रनको साझेदारी गरेका थिए ।
यो विशाल साझेदारीको सहयोगले भारत खेलको जित नजिक पुगिसकेको थियो । महेन्द्र धोनी ५1 रनमा पबिलियन फर्किए सङ्गै भारतले लय गुमाउन पुग्यो । भारतका रोहितले १३३ रनको बिशाल पारी खेलेता पनि , टिमले जित्न भने सकेन।
कमजोर सुरुवात पाएको भारतले ५० ओभरमा ९ विकेट गुमाउदै २५४ रन बनाउदा ३४ रनको पराजय भोगेको हो । अस्ट्रेलियाका रिकार्ड्सनले १० ओभरमा मात्र २६ रन खर्चदै ४ विकेट चट्काए भने बेहेन्ड्रफले दुई र स्टोइनिसले दुई विकेट लिएका थिए ।
Related Items:australiavsindia, recent
यु.ए.इ श्रृङखलाका लागि नेपाली टिमको घोषणा ! शरद भेषावकर नखेल्ने !
सन्दिपको किफायती बलिङ्ग | कसिलो खेलमा सिकर्स चार विकेटले पराजित!
धोनीको उत्कृष्ट पारिमा भारतले उत्कृष्ट जित निकाल्दै हासिल गर्यो ऐतिहासिक सिरिज बिजयी !
बङ्ग्लादेश प्रिमियर लिग खेल्न सन्दिप बङ्ग्लादेश जाँदै | बिपिएलपछि सन्दिप यु.ए.इ टुरमा ब्यस्त
कोहली-धोनी उत्कृष्ट रहदा , दोस्रो एकदिबसियमा भारत ६ विकेटले बिजयी !